Soo Gudbinta Liiska Xubnaha Aqalka Sare Oo Dib U Dhacday, Guddiga Doorashada Oo Labo Maalin u Qabtay Maamul Goboleedyada – Goobjoog News
Soo Gudbinta Liiska Xubnaha Aqalka Sare Oo Dib U Dhacday, Guddiga Doorashada Oo Labo Maalin u Qabtay Maamul Goboleedyada
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) ayaa ku eedeeyay maamul goboleedyada dalka in ay ku guul-dareysteen soo gudbinta liiska ama xubnaha u sharaxan aqalka sare, iyagoo qabtay labo maalin in shaqadaas lagu dhameystiro haddii kale ay doorashada dib u dhici doonto mas’uuliyaddana ay madaxda maamullada qaadi doonaan.
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) wuxuu caddeynayaa in manta oo ah 5ta bishaOktoobar 2016ka is la markaasna ah maalintii loo muddeeyey in Maamullada Dowlad Gobaleedyadu ay soo gudbiyaan magacyada musharraxiintaA qalka Sare in aysansuurogelin. Sababtuna ay tahay Maamullada oo aan weli soogudbin magacyada musharraxiinta. Sidaasi darted waxaa guddigu ugubaaqayaa mas’uuliinta MaamulGobaleedyada in ay labo maalmood gudahood magacyada musharraxiinta AqalkaSare ku soo gudbiyaan.
Waxa kale oo Guddigu ugu baqayaa Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ) in ay dedejiyaan hannanka doorashada xubnaha Aqalka Sare u matalaya Gobalada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe, maadaama labadaasi gobolaysan lahayn dowlad gobaleed.
Guddigu, sidoo kale waxaa uu ugu baaqayaa madasha MHQ in ay sida ugu dhaqsiyaha badan go’aan uga gaaraan qaab ka lagu soo xulayo xubnaha aqalkas are u matalaya Somaliland si loo dardargeliyo hannanka doorashada 2016 ka.
Ugudanbeytii, waxaa guddigu ka digayaa in haddii waqtigii loogu talogalay lagu soo gudbinwaayo magacyada musharraxiinta aqalka sare in ay sababi karto in howlahii doorashadu ay ku qabsoomi waayaan waqtigii loo qorsheeyey.
Somaliland oo looga diyaar garoobayo doorashooyin ka dhaca (Dhageyso)
Nin Soomaali ah oo lagu dilay magaalo ku taala dalka Koonfur Afrika
Xlaelc udjbvt buy generic cialis canadian cialis
Uezelt egoemb online viagra purchase buy cialis canada
Yutvwh kmxsos Pharmacy viagra cost of cialis
Dywsbo aqjxbd Buy discount viagra best online pharmacy
Ujgmuv ngtkgt generic cialis online online canadian pharmacy
Zlmtpq tmyogu cvs pharmacy Ngmen
cheapest cialis 5mg dgeneric cialis top web source for ciali...